Balankii Guddoomiye Mursal ee “Roobow ama xilkeyga” oo aan weli fulin – Kalfadhi
Balankii Guddoomiye Mursal ee “Roobow ama xilkeyga” oo aan weli fulin
Shan bil kahor wuxuu Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sheekh u balanqaaday odeyaasha dhaqanka ee Baydhabo in uu sida ugu dhaqsiyaha badan u dalban doono in loo siidaayo Mukhtaar Roobow Cali oo ka mid ah hoggaamiyeyaashii hore ee Al-Shabaab. Balanka guddoomiyaha waxa uu yimid kadib rabshado ka dhashay ciidamada dowladda oo Baydhabo kasoo xiray Roobow oo ka mid ahaa musharixiinta ugu cadcadaa ee doorashada madaxweynemo ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed.
“Hadii aan soo deyn waayo Abuu-Mansuur (Magaca kale ee Roobow) waxaa idin ballan-qaadayaa in aan booska baneen doono si loo helo qof kale oo soo daayo Sheekha,” ayuu yiri Maxamed Mursal oo odeyaasha kula hadlayay madal warbaahintu joogtay bishii Janaayo. Waxaa guddoomiyaha maalinkaa dhinac fadhiyay madaxweynaha cusub ee Koofur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed “Lafta-gareen, iyo xildhibaan Cabdifataax Ibraahim Geesey. Dhowr qof ayaa ku geeriyooday rabshadaha ka dhashay xarriga Rooboow oo loo arkayay mid siyaasadeed islamarkaasna ay soo faro-geliyeen ciidamada Itoobiya ee Baydhabo jooga.
Ku-simaha taliyaha hay’adda sirdoonka iyo nabad-suggida qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo ay baarlamaanka lagu weydiiyay xarriga Roobow iyo sababta aan maxkamad loo horkeenin, wuxuu sheegay in hay’adda aysan waxba kala socon, lugna ku laheyn xarriga Roobow. Wuxuu u sheegay baarlamaanka inay arrimahaas wax ka weydiiyaan hay’adaha garsoorka iyo kuwa kale ee ku lugta leh ee uusan carabaabin.
Cali Boor oo ka mid ah odeyaasha guddoomiye Mursal balanka u sameeyay ayaa ku eedeeyay guddoomiyaha baarlamaanku in uu ka gaabiyay fulinta axdigii Baydhabo. Waxa uu intaa ku daray in guddoomiyahu ku mashquulsan yahay arrimo siyaasadeed oo kale. “Sheekh Mukhtaar dembi uma xirna; wuxuu u xiran yahay maxaa u tartantay,” ayuu Cali Boor u sheegay Kalfadhi. Wuxuu Cali Boor oo ka mid ah hoggaan dhaqameedka beesha Mukhtar Roobow uu ugu baaqay Guddoomiyaha Golaha Shacabka iyo xubnaha kale ee baarlamaanka ku matela Koonfur Galbeed inay ka shaqeeyaan siideynta Mukhtaar Robow ama in maxkamad la horkeeno.
Mukhtaar Roobow Cali oo ka mid ahaa hoggaamiyeyaashii Maxkamadaha Islaamiga ah kadibna noqday afhayeenka Al-Shabaab ayaa xiran bishii lixaad. Xarrigiisa kahor ayuu heshiis la galay dowladda isagoo oo degenaa hoy ay dowladdu siisay kahor inta uusan isu sharixin madaxweynenimada Koonfur Galbeed. Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sheekh oo aan xiriir la sameynay inooma suurogelin in aan helno.
Senatarro, Wasiir ku xigeen iyo mas’uuliyiin kale oo goordhow lagu soo celiyay magaalada Muqdisho
Senatarro, Wasiir ku xigeen iyo mas'uuliyiin kale oo goordhow lagu soo celiyay magaalada Muqdisho